Myanmar Muslims' Voice (MMV) | မြန်မာမွတ်စလင်တို့၏ အသံ | Page 2
European Parliament condemns practices against Muslim minority in Myanmar European Parliament condemns recent crimes and widespread discrimination against albinos in Malawi, ongoing restrictions of fundamental democratic rights in Bahrain and practices that discriminate against Myanmar’s Muslim minority, in particular the More »
“ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးသည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်နေ့ အမှတ်တရ” ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြတ်သားဆုံး ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီရေးသို့ အသွင်းကူးပြောင်းနေပြီ ဟူ၍ လူထုအတော်များများက ထင်မှတ်မှားနေကြချိန် ဤနှစ် ဤလအတွင်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အခိုင်အမာရှိနေသေးကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓက တခုကို အမှတ်မထင် တွေ့ မြင်လိုက်ကြရသည်။ More »
ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအကယ်ဒမီမှ ဥပဒေအလုပ်သင်များ ခေါ်ယူခြင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်မြို့ တွင် တည်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီတွင် ဥပဒေ အလုပ်သင် (Law Internship) အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ ချရသည့် ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဖက်ဒရယ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှုအား ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးလျှက် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ဖွဲ More »
DVB – လှိုင်းဘွဲ့ ရွှေဂွန်းရွာတွင် ဗလီဘေးနား စေတီတည် DVB မြန်မာပိုင်း သတင်းအား တဆင့်ပြန်လည် ဖော်ပြသည်။ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာရှိ ဗလီနဲ့ ကပ်လျက်နေရာမှာ မနေ့ညနေက စေတီတဆူကို နာရီပိုင်းအတွင်း အပြီးအစီး တည်ခဲ့တယ်လို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာသားတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒီစေတီတည်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဦးစီးပြီး လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ကွမ်းတောကျေးရွာက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း စေတီတည်ခဲ့အပြီး တပတ်အတွင်း ဗလီနဘေးမှာ ထပ်မံစေတီတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗလီနဘေးမှာ More »
Myanmar shelves investigation into killing of journalist Ko Par Gyi International Press Institute Ko Par Gyi shot in 2014 while in military custody Myanmar must not allow the case ofajournalist killed in 2014 while in military custody More »
UN Special Rapporteur on human rights in Myanmar to undertake official country visit June 19, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေးသတင်း The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, will undertake an official visit to the country from 20 June to 1st July 2016. This visit takes place atakey juncture for Myanmar withanew Government in place since April following last year’s historic elections. Read More ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၂၀) – ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ရှုဒေါင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း June 19, 2016 ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း မြန်မာတွင် ဆိုရိုးစကား နှစ်ခုရှိသည်။ တခုမှာ “မြှော်လင့်တုံး ကျော့ဆုံးလာချေပြီ။” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မိမိမြှော်လင့်စောင့်စားနေသော ချစ်သူ ရောက်ရှိလာပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြှော်လင့်သည့် အတိုင်းဖြစ်လာပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း ၀မ်းမြောက်စွာရည်ညွှန်းသည့် သဘောကို ဆိုလိုသည်။ အခြားတခုမှာ “တိမ်ကြားမင်းခေါင် က ငှက်ပျောတောထဲက ထွက်လာတယ်။” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးမည့် မင်းလောင်းသည် ကောင်းကင်မှနေ၍ တိမ်ကိုစီးကာ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ပြည်သူလူထုကမြှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့ တွင်မူမင်းလောင်းသည်မြေပြင် ငှက်ပျောတော ထဲမှနေကာ လေးဘက်ထောက်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ပျက်မှုကို ဖေါ်ကျူးသည့် သဘောဆောင်သည်။ . ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည် “မြှော်လင့်တုံး ကျော့ဆုံးလာခြင်း” ဖြစ်သလား၊ “တိမ်ကြားမင်းခေါင်” ဇာတ်ခင်း နေခြင်း ဖြစ်သလားဟူသည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ရှုဒေါင့်မှ
Read More Buddhist Fanaticism: I Rejected It June 12, 2016 ENGLISH, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Sumeet Grover – TRANSCEND Media Service Recently an article appeared on the Guardian UK whereaformer Christian,aJew andaMuslim wrote about quitting religion because they realised they were made to cultivate false beliefs about themselves and others. My story is about quitting the largest Buddhist organisation in the UK
Newer posts » Search “MMV” LIKE “MMV” ON FACEBOOK Recent News	European Parliament condemns practices against Muslim minority in Myanmar